> Resource > Video > Sida loo Copy DVD on OS X Mavericks
Haddii aad u cusboonaynta in OS X Mountain Libaaxa, oo aad ka heli lahayd software nuqul DVD uma shaqeeyo. Kuwa doonaya in ay dib ilaa DVDs (oo ay ku jirto faylasha ISO) si adag drive, disk adag, ama nuqul DVD disc ah in a DVD disc cusub ee Mountain Libaaxa, waxaa jira copier DVD weyn u Mountain Libaaxa Doorashadaada.
Taasi Wondershare Video Converter Ultimate for Mac kugu caawin karo samaynta nuqul ka mid ah filimada DVD u gurmad in ku dhawaad ​​1: 1 oo tayo leh. Iyo Furfuris waa mid aad u fudud. Hadda, aan ka bilaabi si ay u bartaan sida loo nuqul DVD filimada aad u adag drive, disk adag, xitaa DVD disc cusub tan nuqul DVD weyn Mountain Libaaxa.
1 DVD Load in copier DVD this Mountain Libaaxa
Marka hore, gelin mid ka mid ah cajalladaha DVD aad rabto in aad ka, ka dibna app this ordi. Markaad u timaadaan inaad interface ugu weyn, waxa aad helaysaa saddex doorasho oo kala duwan: U beddelaan, Guba, oo Download. Si aad nuqul DVD ah ee gurmad, kaliya u tag "Guba" tab> "Copy DVD" doorasho ee dhinaca kore ee bidix ee ah "Guba" interface. Ka dib markii in, wax yar ka maraan si drive DVD ay u jiidi DVD icon in ay app this. Hadda, file DVD aad ayaa ku qoran in ay leeg- ee app this.
2 Bilow in aad nuqulka DVD on Mountain Libaaxa
In geeska hoose ee midigta ah app this, waxaad riixi kartaa ah "Guba" icon in ay dib u kor DVD. Daaqadda soo socda, waxaad arki doonaa gebi ahaanba waxaa jira afar doorasho soo saarka, "DVD cajalid", "DVD Folder", ".dvdmedia" iyo "ISO File". Waxaad dooran kartaa hab kasta oo ka mid ah in ay dib u kor DVD faylasha aad. Si aad nuqul DVD drive si adag ama disk adag, waxaad dooran kartaa mid kasta oo ka saddexda doorasho ee la soo dhaafay. Haddii aad rabto in aad nuqul ka mid ah DVD disc cusub, kaliya dooran "cajalid DVD", markaas DVD disc maran, magaca DVD cusub, oo ku dhufatey "Save".
Bal eeg, app tani waxaa la bilaabo in aad nuqulka DVD in DVD, la soo bandhigay bar horumarka. Dabcan, aad ha karo waxa maamula ee asalka ah, ka dibna ay leeyihiin koob shaah ah oo ka baxsan ama in la sameeyo shaqooyin kale oo ku saabsan Mac sii.
Muuqaalada More ay bixiso tan DVD gurmad qalab loogu Mountain Libaaxa
DVD files ayeey - dalagga, jar, isku shaandheyn, qabsato video, ku dar Cinwaan iyo watermark iwm oo yeeshaan, kaliya riix "Edit" icon dhinaca midig ee kasta bar item geli interface tafatirka ay.
Guba video inay DVD -Burn oo dhan qaabab video caan ah si ay folder DVD, ISO files sawirada, iyo DVD disk, oo ay ku jiraan wmv, MOV, AVI, MP4, MTS, FLV iyo in ka badan.
Beddelaan DVD in qaabab iyo qalab kala duwan -Backup aad DVD disc oo waxaan ka dhigi playable ku computer, ciyaaryahan warbaahinta la qaadi karo, ama telefoonada gacanta on go ah.
Free download DVD Copier Mountain Lion (version maxkamad):